घुमफिर. Break n Links: Media for all - Across the globe
५ हजार तिरेर पर्यटन बोर्डमा सिइओको आवेदन दिनुस्, मासिक ३ लाख तलब लिनुस्
नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)का लागि आवेदन खुला भएको छ। अहिले कार्यकारी रहेका दिपकराज जोशीको कार्यकाल सकिन लागेपछि नयाँ सिइओ छनौटको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रभावकारी प्रवद्र्धनका लागि आफ्ना जहाज तथा अन्य यातायातका साधनमा भ्रमण वर्षका लागि प्रतीक चिह्न राख्न शुरु गरेको छ ।
लुकेका गाँउको भिडियो बनाऔं, पाँच लाखसम्मको पुरस्कार जितौं
आफ्नो गाउँलाई पर्यटकीय ठाउँ बनाउने अवधारणा राखेर वी विल राइज फाउण्डेसनले भिडियो च्यालेन्ज सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य अनरुप फाउण्डेसनले नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो।
भोटेकोशीमा मंसिर १० देखि अन्तर्राष्ट्रिय जलयात्रा प्रतियोगिता हुँदै
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा आगामी मंसिर १० देखि तीन दिनसम्म १८ औं हिमालयन ह्वाइटवाटर च्यालेन्ज -२०१९ हुने भएको छ। ‘पर्यटनको लागि नदि संरक्षण’ भन्ने मुल नारासहित नेपाल एशोसियशन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सीज् (नारा) ले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जलयात्रा प्रतियोगिता गर्न लागेको हो।
जाने हाे, तातोपानीमा नुहाउन? (भिडियोसहित)
नेपाली बजारमा हस्तक्षेपकारी ब्रान्डको रुपमा स्थापित मार्सी चामल उत्पादनको लागि पहिलो पटक काली मार्सी धान रोपिएको ठाउँ। अर्थात मार्सी धानको सफल परिक्षण गराउने जिउलो। जुन आज जुम्लाको अर्को परिचय बनेको छ।
जरूर केही छ पहाडमा
ती पहाड उस्तै छन्। त्यो हिमाल उस्तै छ। उही गतिमा अनवरत रुपले बगिरहेकैछन् खोलानाल र नदीहरु। कुनै युवतीले कपाल कोरी बाटी गर्दा टल्किएको सिउँदोझै हिजो आज टल्किरहेका छन् पहाडको छातीमा अन्दाधुन्द पाराले कोरिएका कच्ची सडकहरु। विष्टको कवितामा भनिएझै उसो त केही छैन पहाडमा र जरुर पनि केही छ त्यही पहाडमा। जङ्गलमा बदेल बादरहरुको राज छ।
राइड टु सिन्धुलीगढी साइकल यात्रा सुरू
पूर्वकाे पर्यटकीयस्थलको भ्रमणका लागि हवाईजहाज सुरु हुने
जापानको सुख सयल त्यागेर थबाङीको उपचारमा खटिएका डाक्टर